भोजराज भाट/उजिर मगर/मनोज अधिकारी, पालुङटार, मंसिर १०-एकीकृत माओवादीका लडाकुहरुले चालु विस्तारित बैठकमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुलाई सेना समायोजन या क्रान्ति गर्ने, त्यसबारे स्पष्ट धारणा ल्याउन माग गरेका छन्। सेना समायोजनका नाममा अकर्मण्यता नराख्न उनीहरूले आफ्नै नेतालाई चेतावनी दिएका छन्। माओवादीको छैठौं विस्तारित बैठकको पाँचौ दिन कमाण्डरहरूले अस्थायी शिविरभित्रको संक्रमणकाल जतिसक्दो छोट्याई स्पष्ट कार्यदिशा ल्याउनुपर्ने आबाज उठाएका हुन्।
सेना समायोजन समिति सदस्य तथा पार्टी इन्चार्ज वर्षमान पुनका अनुसार उनीहरूले सेना समायोजन चाँडै सक्न जोड दिए। 'समायोजन हुने भए हुने र नहुने भए नहुने भन्नु पर्यो। सेना समायोजनबारे स्पष्ट धारणा नेतृत्वबाट आउनुपर्छ। र त्यो कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्नुपर्छ,' लडाकुलाई उद्धृत गर्दै पुनले सञ्चारकर्मीसँग भने।
पुनले डिभिजन प्रतिनिधिहरू सेनाको हैसियतमा नआएको जिकिर गर्दै 'बैठकमा पार्टीको हैसियतले आएकाले आफ्ना कुरा निडर भएर' राखेको दाबी गरे। उनले थपे, 'उनीहरूलाई कुनै धम्की र चेनअफ कमाण्डको कुरै थिएन।'
तर सहभागी स्रोतहरूका अनुसार लडाकुसमेत तीन नेताका पक्षमा विभाजित देखिएका थिए।
बन्दसत्रको चौथो दिन बिहीबार सात डिभिजनका लडाकु प्रतिनिधिले बोल्ने क्रममा आ-आफ्ना पक्षलाई समर्थन गर्दै धारणा राखेपछि पार्टीभित्र तीन खेमाका नेताका पक्षमा अन्य क्षेत्रजस्तै यहाँ पनि विभाजन देखिएको हो।
माओवादी बैठकमा शिविरका लडाकु सहभागी हुन नहुने विवाद चलिरहेको बेला उनीहरू यसमा सहभागी मात्र भएनन्, आफ्ना पक्षसमेत व्यक्त गरे।
प्रत्येक डिभिजनबाट एक-एकजनालाई मात्र बोल्न दिएर पूरै लडाकु अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्षमा मात्रै रहेको सन्देश दिने योजनासमेत एकभन्दा बढी लडाकुलाई बोल्न दिएपछि विफल भएको छ।
सेना संरचनाअनुसार 'चेनअफ कमाण्ड'मा चल्ने भएकाले 'जनमुक्ति सेना'ले 'सुप्रिम कमाण्डर' दाहालको पक्षमा मात्र बोल्न सक्छन् भन्ने मान्यतासमेत यसले भत्काएको छ। सैद्धान्तिक रूपमा सेना समायोजन विशेष समितिअर्न्तगत गइसकेका लडाकु पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधमा रुमलिएका छन्। शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका लागि मुख्य विषय बनेका माओवादी लडाकुभत्रै पार्टी नेतृत्व विभाजनमा परेपछि स्थिति अरु जटिल बन्ने भएको छ।
अन्य राज्य समितिकै हैसियतमा बोलेका लडाकुका प्रतिनिधिले भने नेताहरूलाई बढी घोचपेच गरेनन्। बाबुराम भट्टराई पक्षधर रहेका केही लडाकुले भने निकै चर्का धारणा राखे। पार्टीले तीनवटा हतियार (दस्तावेज) दिएर त्यसलाई 'चेनअफ कमाण्ड'का रूपमा स्वस्थ छलफल गर्न नदिएको गुनासो उनीहरूले पोखेका थिए।
'अध्यक्षले दिएको हतियार बीच बाटोमै जाँदा पड्किन्छ। (मोहन) वैद्यजीको निशानामा गए पनि ब्यारेल भाँचिन्छ। भट्टराईले दिएको हतियार सही निसानामा लाग्छ भनेर जनमुक्ति सेना बसेको छ,' पहिलो डिभिजनका भट्टराई पक्षधर कमाण्डर 'प्रमोद'लाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भने।
भट्टराई र अर्का उपाध्यक्ष बैद्य पक्षधर लडाकुका प्रतिनिधिले बोल्दा सिधै अध्यक्ष दाहाललाई लक्षित गरे पनि दाहाल निकट लडाकुले भने पूरै नेतृत्वलाई दोष दिने हिसाबले बोलेका थिए। उनीहरूको राय थियो, पार्टीले सही कार्ययोजना नदिएकाले शिविरमा थुनिएर बस्नु परेको छ।
उपाध्यक्ष वैद्य पक्षबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लडाकुले 'चेनअफ कमाण्ड'को नाममा अध्यक्ष दाहालको विचारमात्रै अघि बढाउन खोजेको भन्दै आक्रोश पोखेको सहभागीहरूले बताए। वैद्य निकटकै लडाकु 'दिवस'ले भने, 'अध्यक्षले भनेको राष्ट्रियताको आन्दोलन सत्तामा जाने खेलमात्र रहेछ।'
'सेनाहरूले अलि सन्तुलित रुपमा बोले। उनीहरूले पार्टीले एक ढिक्का भएर निर्णय गरेपछि सेनाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तयार छौं भने,' एक सहभागीले नागरिकसँग भने।
अहिलेसम्म पार्टीकै निर्णय अनुसार आफूहरू शिविरभित्र रहेको समान धारणा उनीहरूले राखेका थिए। 'तपाईंहरू मिलेर एउटै प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। हिजो पनि पार्टीको निर्णय मानेका हौं। आज पनि मान्छौं। अझै पनि जनमुक्ति सेना सल्लाको रुखमुनि शिविरमा जीवन बिताइरहेका छौं,' लडाकुको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागीले भने।
'सेना समायोजन भयो भने क्रान्तितिर अगाडि बढ्छ या संशोधनवादतिर अगाडि जान्छ? बाबुरामको दस्तावेजले सेना समायोजनतिर जोड दिएको छ, किरणको दस्तावेजले सेना समायोजन होइन, क्रान्तितिर जोड दिएको छ तर दाहालको बृहत शान्तिसम्झौता र १० वर्षको उपलब्धी जोगाउँदै सेना समायोजन हुन्छ भन्ने हामीले दस्तावेजमा बुझेका छौं,' कमाण्डरको भनाइ थियो, 'यसलाई अक्रमर्ण्यतामा राख्न राख्नुहुँदैन, समायोजन वा युद्ध के हो? नेताहरूबाट स्पष्ट जवाफ आउनुपर्छ।'
'अहिल्यै आंशका गर्नुपर्ने ठाउँ देख्दैनौ, यो संक्रमणकाल जति लम्बाउँदै गयो, त्यत्तिनै समस्या देखा पर्दैछ', कमाण्डरको सामूहिक स्वर थियो, 'संक्रमणकाल चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याएर सबै उपाध्यक्षलाई मिलाएर नयाँ प्रकारको कार्यदिशा बढाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।'
बिहीबारको बैठकमा 'जनमुक्ति सेना'का तर्फबाट २० जनाले धारणा राखेका थिए। लडाकुको सात वटा डिभिजनलाई सात वटै राज्य समितिको मान्यता दिइएको थियो। लडाकुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति उपाध्यक्षद्धय वैद्य र भट्टराईले ठूलो आंशका गरेका थिए। उपाध्यक्षद्धयले राजनीतिक हैसियतले भेलामा आइसकेपछि लडाकुलाई खुलेर बहस गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए।
भूगोल र अन्य राज्य समितिका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्षद्धय मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईको राजनीतिक प्रस्तावमा छुट्टाछुट्टै तीन जनाले बोल्ने तालिका भए पनि लडाकुको तर्फबाट अधिकांश डिभिजनबाट दाहालको, केहीले वैद्यको र भट्टराईको तर्फबाट बोल्ने संख्या न्यून थियो। लडाकुका तर्फबाट सातौं डिभिजनका टंक तिमिल्सिनाले खुलेरै भट्टराईको वकालत गरेका थिए।
दोस्रो डिभिजनबाट वैद्य र भट्टराईको पक्षमा बोल्ने कोही उभिएनन्। पाँचौ र छैटौ डिभिजनबाट भट्टराईको पक्षमा कसैले बोलेन। वैद्य र भट्टराईका पक्षमा बोल्नेले पनि दाहालको खुलेरै आलोचना गर्न सकेनन्। 'जनमुक्ति सेना'का चारै जना डेपुटी कमाण्डर वर्षमान पुन, नन्दकिशोर पुन, जनार्दन शर्मा र चन्द्रप्रकाश खनाल दाहालको पक्षमा भएकाले लडाकु कमाण्डरबाट निर्देशन बमोजिम मात्र बोल्ने उपाध्यक्षद्धयको आंशका थियो।
राज्य समिति सदस्यले व्यक्तिगत आलोचना, टिकाटिप्पणीका शब्दावली भने लडाकुका प्रतिनिधिले आफ्नो भाषणमा प्रयोग गरेनन्। उनीहरू फरक फरक दस्तावेजमा उभिए पनि राजनीतिक र मर्यादित ढंगबाट खण्डन गरेका थिए। अन्य समयमा हरेक वक्तालाई १० मिनेटको समय दिइए पनि बिहीबार बोल्नेलाई समय पाबन्दीको कारण देखाइ ६ मिनेट मात्र दिइयो।
लडाकुका तर्फबाट बोल्ने सबैभन्दा उच्च छैठौंका डिभिजन कमाण्डर महेन्दबहादुर शाही थिए। लडाकुका तर्फबाट चौथो डिभिजन कमाण्डर तेजप्रकाश ओली, सातौ डिभिजन कमाण्डर सन्तु दराई, पाँचौ डिभिजन कमाण्डर कालिबहादुर खाम र तेस्रो डिभिजन कमाण्डर धनबहादुर मास्के मगर केन्द्रीय समिति सदस्य (सिसिएम) भएकोले उनीहरुले बोल्न पाएनन्। विस्तारितमा सिसिएमले बोल्न नपाइने व्यवस्था छ।
सातौ डिभिजन कमाण्डर शाही, प्रथमका डिभिजन कमाण्डर यमप्रसाद अधिकारी र दोस्रोका सुकबहादुर मगरले अध्यक्षकै पक्षमा धारणा राखेका थिए। 'जनमुक्ति सेना पार्टीको नीति र नियममा सधै तयार छ, तर जनमुक्ति सेना मुख्य होइन, विचार मुख्य हो', कमाण्डर शाहीले भेलामा भने, 'तीन वटै दस्तावेजको निष्कर्ष, निचोड, एकता र रुपान्तरण हुन आवश्यक छ।'
शाहीले दस्तावेजका नाममा जनमुक्ति सेनालाई गर्न नहुने औल्याए। 'हामीलाई तानातान गर्नेभन्दा पनि नेपाली क्रान्तिको साझा पुजि हो, जसलाई तानातान गर्नेभन्दा पनि क्रान्तिलाई जसले अन्त्यसम्म पुर्याभउँछ, त्यसैको सेना हुन्छ।', उनले भने, 'अहिलेसम्म पार्टी हेडक्वार्टरप्रति हाम्रो विश्वास छ।'
प्रथम डिभिजन कमाण्डर अधिकारीले दाहालको बचाउ गर्दै भने, 'प्रचण्डको दस्तावेजले क्रान्तिको रक्षा गर्छ, आवश्यकता पर्दा यसले नै क्रान्ति गर्न सक्छ।' उनले अध्यक्ष दाहाल अहिल्यै नबिग्रेको दाबी गरेका थिए।
दोस्रो डिभिजन कमाण्डर रोक्का मगरले तीन वटै दस्तावेजको समिक्षात्मक टिप्पणाी गरेका थिए। रोकामगर पहिले बैद्यनिकट मानिन्थे। उनले बुधबार बोल्नेक्रममा तठस्थजस्तेा देखिनेगरी घुमाउरोपारामा दाहालको समर्थन गरेका थिए।
सातौं डिभिजनका भाईस कमाण्डर वीरेन्द्र बुढाले अहिलेको परिवेशमा दाहाल नेतृत्वको विकल्प नभएको दाबी गरे। 'सेनामा क्याण्टानेमेण्टमा छ, हतियार कण्टेनरमा छ तर हतियार हामीसँगै छ', बुढाले भने, 'पार्टीले आदेश गरोस्, हामी टि्रगर दबाउन अहिले पनि तयार छौं।'
भेलामा बोल्नेक्रममा बैद्य पक्षधरले 'जनमुक्ति सेना'ले क्रान्ति गर्न सक्दैन भनेर टिप्पणी गरेका थिए। सातौ डिभिजनका बिग्रेड कमाण्डर हिमालले व्यंग्यात्मक तवर भने, 'हामीलाई चार हजार तलबको भ्रष्टाचारको आरोप लगाउने नेताहरूले हामी यो दिन तयार छौं तर तपाईहरूको डिनरका लागि कति दिन पुग्छ?'
०६५ मंसिरको खरिपार्टी भेलामा दुई सय २० जना प्रतिनिधिमध्ये २१८ जनाले दाहालको पक्षमा मत दिएका थिए। त्यतिखेर अध्यक्ष दाहालले भने आफ्नो मात्र दस्ताबेज लडाकुको शिविरमा छलफलका लागि पठाएको बैद्य पक्षधरको आरोप थियो। अहिले तीन वटै दस्तावेजलाई शिविरमा पढ्न दिइए पनि दाहाल निकट चारै जना डेपुटी कमाण्डरले अध्यक्षको पक्ष धारणा राख्नुपर्ने लविङ गरेका थिए।
कसले कसको पक्षमा बोले?
दाहाल : यमप्रसाद अधिकारी
बैद्य : विवश
भट्टराई : प्रविण
चौथो धार : कृष्ण राई
दाहाल : सुकबहादुर रोकामगर
दाहाल : प्रतिक
बैद्य : उदयबहादुर चलाउने
भट्टराई : श्रवण
चौथो धार : रविन्द्र
दाहाल : सुरेश पहाडी
बैद्य : पावेल
भट्टराई : सुदिप
दाहाल : अविनाश
दाहाल : महेन्द्रबहादुर शाही
बैद्य : नेपबहादुर कुँवर
दाहाल : विरेन्द्र बुढा
बैद्य : हिमाल
भट्टराई : टेक तिमिल्सिना